Aaladda otomaatiga ah ee loo yaqaan 'Presto automation' waa hormuud bixiye xalal casri ah oo noocyo badan oo ka mid ah mashiinnada warshadaha ah: walxaha dhaadheer ee sarreeya, kalluumeysatada kuleylka kuleylka ah, xalalka istiraatiijiyadda indhaha ee qalabka caafimaadka iyo dharka aan duubneyn, khadadka wax soo saarka ee qaabeynta loogu talagalay waxayna bixisaa xalal ballaaran oo loogu talagalay otomatiyada warshadaha .
Waxaan nahay shirkad xasilloon oo firfircoon oo kobcisa leh warshadda wax soo saarka iyo xafiisyada waaweyn ee ku yaal Shanghai, Shiinaha. Waxaan si joogto ah u eegeynaa oo aan dib u qiimeyneynaa dalabkeenna si aan ula jaanqaadno isbeddelada suuqa ee weligood isbeddelaya iyo baahida macaamiisha.
Ku takhasusay mashiinka kululeeyaha kuleylka ee caafimaadka, dawooyinka iyo warshadaha kale qiimaha dhaqaalaha. Khibradeena injineernimada, dib u soo celinta 16 sano, shaqaale xirfadlayaal ah oo luqado badan leh oo leh ganacsi ganacsi oo caalami ah oo xoog leh, rikoodh warshadeed oo la xaqiijiyay iyo sidoo kale xiriir shaqsiyadeed oo adag oo lala yeesho alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha ayaa ah hantideena ugu weyn.
Waxaan sidoo kale abuuraynaa naqshadaha caadada u ah kululeeyaha kuleylka iyadoo la raacayo dalabaadka warshadaha.
Waxaan dhiseynaa qiyaastii 200 mashiin sanadkiiba! Sanadihii la soo dhaafay, Presto waxay horseed u noqotay qaabkii loo bixin lahaa waxqabadka shaabadda gobolka-Of-The-Art. Mashiinnada iyo aaladaha ay dhisteen Presto waa kuwo si buuxda u waafaqsan CE / UL loona sameeyay si waafaqsan heerarka ISO9001.
OEMs, Soosaarayaasha Qandaraaska iyo Milkiilayaasha Noocyadu waxay ku qiimeeyeen shirkadda 'Presto Automation' inay tahay lamaanayaasheeda wax soosaarka iyo teknolojiyadda lagu kalsoon yahay tan iyo 2004.
Qaabkayaga wax soo saarka iyo hababka otomatiga ah waxay dejiyeen halbeegga macaamiisha ka hawlgala gebi ahaanba warshadaha iyo qaybaha ganacsiga. Ka fikir Presto Automation inay tahay istaraatiijiyadaada istaraatiijiga ah ee tartanka - gobol ahaan, qaran ahaan iyo caalami ahaanba. Waxaan ku takhasusay horumarinta hal-abuurnimo, xalal cusub oo loogu talagalay qaybaha wax soo saarka iyo isu-imaatinka, iyadoo laga faa'iideysanayo qalabka saxda ah ee loo yaqaan 'Presto Automation' oo qayb muhiim ah ka ah nidaamyadeenna.